Xagee tallaabo laga qaadi karaa istaraatijiyaddayda SEO ee Amazon si aad uga taxadarto maalin ka dib?
Markasta oo aan raadino luuqad gaar ah oo ku qoran Amazon, waxaa jira liisto aad u dheer oo badeecado ah oo badanaa u muuqda. Dhamaanteen waan ognahay in wixii isbeddel dhab ah oo la qiyaasi karo (iyo ugu dambeyntii - iibinta) ay soo saari karaan oo kaliya alaabooyinka ku qoran liiska saddexda bog ee ugu horreeya (ma aha inay sheegaan in baahida dhabta ah ee dhabta ah ee muujinaysa helitaanka natiijooyinka raadinta-top 10 ). Sidaas, u ordaya istaraatiijiyad habboon ee SEO for Amazon waxaa laga yaabaa inay u muuqato shaqo dhab ah murugo, gaar ahaan jaleecada hore. Nasiib-wanaag, adduunka ugu wayn ee dukaameeysiga online-ka ah ayaa ugu fiican in ay bixiyaan khibradaha ugu sarreeya ee dadka si ay u helaan dhagaystayaashooda ballaadhan oo heer caalami ah. Amazon shaqo fiican ayey u qabataa - soo jeedinta alaabta saxda ah iyo bixinta iftiinka cagaaran si loo furo tartan suuqa. Ka dib, waxay nolosha ka dhigeysaa in ka badan 80 milyan oo kuwa dukaamada taagan.
Dabcan sida aadka u shaqeynaya waxaa hagaagay qaynuunkiisa ujeeda. Taasi waa sababta ay u noqon lahayd shaqo aad loo maamuli karo - si aad uqorsho maalinba mid ka mid ah - oo la siiyaa inaad fahamto xeerarka ciyaarta oo lagu taageerayo istaraatijiyad la isku habeeyey ee SEO loogu talagalay Amazon. Iyada oo A9 algorithm, Amazon ayaa inta badan ku sharraxan saddexda qodob ee asaasiga ah ee loo yaqaan looyaraanta, sicirka bedelaadda, iyo wax soo saarka wax soo saarka. Habkaa, waxaan hoosta ku socdaa inaan kuu muujiyo qaar ka mid ah meelihii muhiimka ahaa si ay wax uga qabtaan SEO oo Amazon ah oo si fiican uga taxadara bilowgii aad ka heshay dukaanka dhibcaha - aynu ku bilowno kor uqaadida heerka iyo isbedelka.
Tier One: Qalabka Xogta Lahaanshaha
Waa qaybta ugu muhiimsan ee saldhig u ah aasaaska asaasiga ah ee liiska alaabtaada. Taasi waa sababta aan ugu talagalay istiraatiijiyadda guud ee SEO ee Amazon in ay ka soo wareegaan dhinacyada soo socda (iyaga oo siinaya mudnaanta ugu xoogan waa MUSTU WAXAY - u qaado oo kaliya si loo siiyo).
Wareegyada ugu muhiimsan ee SEO-ga ee Amazon.
Wareegaynta Title (ka duwan Google, Amazon albaabka u furan yahay mid kasta, xitaa daal, tijaabooyin leh ereyada muhiimka ah iyo odhaahaha muhiimka ah ee alaabta wax soo saarka);
dhibcooyinka xajinta iyo sharraxaadda (dhamaanba waxaad u baahan tahay halkan kaliya waa inaad buuxisid sanduuqa iibsiga, ha ilaawin inaad ku darto qodobbada muhiimka ah ee saxda ah);
Tixraaca iyo Soo-saaraha (is-sharax);
Qaybta iyo Qayb-hoosaadka (kaliya hubi inaad ku biirto qaybta saxda ah, haddii aadan rabin in alaabtaada lagu soo bandhigo qaybo khalad ah);
Waqtiga Goobidda (buuxi shan goobood oo ka mid ah keywords keywords bartilmaameedka, iska ilaali iyadoo la isticmaalayo kuwa isku mid ah celcelis ahaan - aad ka fiican inaad tixgeliso isticmaalka isku midka ah keywords keywords);
URL (ka fikir fiican ka hor inta aanad abuurin raadinta URL ee boggaaga badeecada, bixin taxaddar kugu filan si aad u hesho wax walba - Amazon ayaa u isticmaaleysa si loo go'aamiyo liistadaada iyo raadinta muhiimka ah).
Tier Two: Heerka Dib u Beddelidda
Haddii aad rabto in alaabtaada si ay ula kulanto macmiilka dalbashada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah - waa inaad Amazon ku talisaa in dad badan oo ka mid ah dukaamada ay raadinayaan. Sidaa darteed, waxaa jira isku-dheelitir laba-dhexdhexaad ah inta u dhaxaysa sicirkaaga kala duwan iyo danta macaamilka (oo ay ku jiraan kuwa Amazon laftiisa).
Meelaha muhiimka ah ee lagu hagaajinayo istaraatiijiyada CTR iyo SEO ee Amazon:
Gawaarida sare mar walba waxay ka dhigan tahay natiijada natiijooyinka raadinta meel ku taal bogga hore;
Dib u eegida macaamiisha iyo dhiirigelinta emailka (tusaale ahaan isticmaalka AMZDiscover qalabka online si loo barto macaamiisha suurtogalka ah);
Su'aalaha iyo Jawaabaha qaybta;
Sawirada cagaarka ah oo sawir weyn ka bixisa boggaaga boggaaga;
Heerka Xilliga iyo Celceliska Waqtiga Booqashada ayaa waliba saamaynaya isbeddelladaada, xasuusnow Source .